Iimpawu, indlela yobomi kunye nezifo zentlanzi emdaka | Ngeentlanzi
Kwiilwandle zethu kunye neelwandle kukho inani elikhulu leentlanzi ngeentlobo ezahlukeneyo ezingaqhelekanga kunye nazo zonke iintlobo zobukhulu. Umzekelo wale ntlanzi yelanga. Njengoko inokungafani ncam nezinye iintlanzi, ayibonakali ngathi iyintlanzi. Namhlanje siza kuhlalutya ngokucokisekileyo intlanzi eyaziwa phantsi kwegama le-eels kwaye ichazwe njengeentlanzi. Azizizo iinyoka ezifanelekileyo, kodwa zikhangeleka zinjalo. Imalunga nayo iintlanzi zemoray.
Ngaba uyafuna ukufumanisa zonke iimfihlelo ezifihlakeleyo zolu hlobo? Qhubeka ufunda ukuze wazi ngakumbi.
4 Iintlanzi eziBrown ekuthinjweni
I-moray fish inkulu kwaye Yeyasekhaya iMuraenidae. Sitshilo ukuba yaziwa ngokuba zii-eels kuba zikwi-Anguilliformes. Ezona mpawu ziphambili ezinazo zonke iisampulu zalo myalelo kukuba azinawo amaphiko emiphunga kunye neefestile. Ukongeza, banesikhumba esigudileyo ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwesikali. Olu hlobo luxhaphake kakhulu kwiMeditera kwaye lumelwe kakhulu kulwandle olushushu nolushushu.
I-moray eel inomzimba olinganiswe kakuhle njenge-eel kwaye inokufikelela ukuya kuthi ga kwi-1,5 yeemitha ubude. Ubunzima bayo buhlala bujikeleze i-15 kg, nangona uninzi lweesampulu ihlala iphakamile. Umbala uhluka ukusuka kumbala omnyama ukuya kumbala omnyama ngamanye amabala amnyama. Ulusu lwayo lunezigantsontso kwaye alunazikali, njengoko besesitshilo ngaphambili.
Isiphelo somqolo siqala ngasemva kwentloko yaso kwaye siyaqhubeka ukuya esiphelweni se-caudal esidityaniswe ne-anal fin. Abanawo amaphiko e-pectoral kwaye amazinyo abo made kwaye abhekisiwe. Umlomo mde kwaye womelele kwaye ufikelela emva kwegill.
I-moray fish ifumaneka kulo lonke uLwandle lweMeditera. Imelwe kukuvela kwayo kumanzi akweleenjiko kunye nakwezifudumeleyo aqala ngakwimpuma yolwandle IAtlantic isuka eSenegal iye kwiiBritish Isles.
Ngokubhekisele kwindawo yokuhlala yendalo, bathanda ukukhetha indawo ezinamatye olwandle ezinje ngezixhobo zekorale apho banokufumana khona indawo efanelekileyo yokufumana amaxhoba emingxunyeni nasezintanjeni.
I-moray eel yoLwandle lweMeditera ikhokelela kubomi bayo bodwa. Bahlala begada intsimi yemvelaphi kwaye babe nomsebenzi wasebusuku. Ukuveliswa kwakhona kwale ntlanzi akaziwa kakuhle, ke ngekhe sikwazi ukuxoxa ngayo ngeposi. Into eyaziwayo kukuba inani elikhulu lamaqanda liveliswa ngexesha lokuzala. Ngaphandle kokuya kufutshane namaqanda angama-60.000. Ukuba baninzi, bathambekele kwiiparasites ezinje nge trematode I-Folliculovarium mediterraneum kunye nefleworm ILecithochirium grandiporum.
Olu hlobo ludla ukutya kwaye luqhekeza. Ngexesha lokusebenza kwayo, izingela ezinye iintlanzi kunye nee-cephalopods. Ngamanye amaxesha kunokufunyanwa ukuzingela ezinye iintlanzi zenyama. Amehlo abo awalunganga kwaye, ngenxa yoko, ukuzingela kwabo bakusekela ikakhulu kwivumba labo. Ngale ndlela bayakwazi ukulandelela ixhoba labo.
Ngumqwengisi xa engafumani olunye uhlobo lokutya. Esi silwanyana simi njengerhamncwa kwindawo ephezulu yokutya. Iyakwazi ukutya ezinye izilwanyana ezinkulu kunayo.
Yintoni eyenza i-moray eel ngaphezulu kwetyathanga lokutya kukuba sisilwanyana esikhulu, esinamandla. Umhlathi wakho unenkqubo ephuhliswe kakhulu enemihlathi yesibini evula xa sele ivulekile eyokuqala.
Ukutya, ibamba ixhoba ngomhlathi wokuqala kwaye ikhuphe, ilungele ixhoba. Olu hlengahlengiso lomhlathi lwenza ukuba i-moray eel ibe ngumatshini olumayo omkhulu. Uninzi lweentlanzi luxhomekeke ekuvulekeni kwemihlathi emikhulu ngokukhawuleza ebangela uxinzelelo olubi lwamanzi ukuba luthathe ixhoba emlonyeni.
Esi sisakhono se-eel sokuginya iintlanzi kunye nezidalwa ezinkulu ziphelele.
Iintlanzi eziBrown ekuthinjweni
Ukusuka kwinto enokuthelekelelwa, Kunzima ukuba neentlanzi ezinezi mpawu kwii-aquariums. Nangona kunjalo, ayinakwenzeka. Kuyimfuneko ukulandela iingcebiso ezithile kwiintlanzi ukukhokelela kubomi obunempilo nobuzolileyo. Olu hlobo lukhuthazwa kuphela kubo bonke abo bantu sele benamava aphambili kwihlabathi lee-aquariums.
Ixhaphake kwizifo zolusu. Njengoko zingenazo izikali, zithambile kakhulu kwinani lamayeza kwaye, xa zithuthwa zivela kwindawo yazo yendalo, zinokuzisa iiparasites ezininzi ngayo. Ukuthintela oku kungcono ukubavalela bodwa. I-Parasitism iyancitshiswa nge-UV sterilizer elungileyo etankini. Ayizukunceda kuphela ukuthintela izifo ezininzi, kodwa iya kunika uzinzo kwi-aquarium.
Ngokumalunga nokuziphatha kwayo, yintlanzi ezolileyo engahlali iphazamisa amanye amaqabane e-aquarium. Nangona kunjalo, I-black moray fish inokuba ndlongondlongo kunye namalungu ohlobo lwawo kunye nezinye ezifanayo. Ngaphandle koko, baneentloni ngokubanzi. Kuya kufuneka ulumkele ukugcina ezinye iintlobo zeentlanzi ezincinci kakhulu xa uzithelekisa nazo, kuba ngomlomo omkhulu onawo ungaziginya ungaziginye ngaphandle kwengxaki.
Qaphela indlela eziphatha ngayo nezinye iintlanzi, unganazo ngaphandle kwengxaki ngeentlanzi ezinobungakanani bayo.
Izifo zihlasela ezi ntlanzi, nangona zihlala zinganiki ngxaki ukuba i-aquarium ikhathalelwe kwaye igcinwe kakuhle. Intlanzi yomlambo i-moray ixhaphake ngakumbi kwizifo kuneentlanzi zolwandle. Ukuba siqaphela ezinye iimpawu zokugula, kufuneka siyivale yodwa kwaye siyenze ikheswa itanki. Baza kudada ngaphezulu kumphezulu we-aquarium ukuthomalalisa ulusu lwakho.
Ngokuqhelekileyo baphendula kakuhle kumayeza amaninzi kwaye baphilisa ngokukhawuleza. Akufuneki usebenzise ubhedu kwitanki lomlambo okanye ungasulelwa.
Xa kugcinwa iintlanzi ezininzi kuqhelekile ukuba zonke iintlanzi zosulelwe nangaphambi kokuba kubonwe iimpawu zokuqala ezilumkisayo, eyona ndlela yokuthintela izifo kukunika intlanzi indawo efanelekileyo kwaye ibonelele ukutya okunezondlo.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcebiso ungonwabela iintlanzi zakho ezimdaka emanzini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yaseMoray